Romafo 4 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Ɔde Kɔmaa Romafo 4:1-25
Abraham gyidi nti, wobuu no ɔtreneeni (1-12)
Abraham yɛ wɔn a wɔwɔ gyidi nyinaa agya (11)
Ɛnam gyidi so na wonyaa bɔhyɛ no (13-25)
4 Sɛ saa na ɛte a, ɛnde dɛn na yɛbɛka sɛ yɛn honam fam agya Abraham nyae? 2 Sɛ nnwuma a Abraham yɛe nti na wobuu no ɔtreneeni* a, anka obenya nea ɔde bɛhoahoa ne ho, nanso ɛnyɛ Onyankopɔn anim. 3 Na dɛn na kyerɛwsɛm no ka? Ɛka sɛ: “Abraham gyee Yehowa* dii, na wobuu no sɛ ɔyɛ ɔtreneeni.”+ 4 Onipa a ɔyɛ adwuma no, sɛ wotua no ka a, wommu no sɛ ɛyɛ adom, mmom wobu no sɛ wɔde no ka, ɛnna wɔatua. 5 Nanso sɛ onipa bi nyɛ adwuma, na sɛ ogye Nea obu ɔbɔnefo bem* no di a, ne gyidi no nti, wobu no ɔtreneeni.*+ 6 Dawid nso kae sɛ, sɛ Onyankopɔn bu onipa bi sɛ ɔyɛ ɔtreneeni na ennyina ne nnwuma so a, saa onipa no ani gye. Nea ɔkae ni: 7 “Anigye ne wɔn a wɔde wɔn mmarato akyɛ wɔn na wɔakata wɔn bɔne so;* 8 anigye ne onipa a Yehowa* remmu ne bɔne ho akontaa da.”+ 9 Saa anigye yi, wɔn a wɔatwa twetia* nko ara na enya anaa wɔn a wontwaa twetia nso ka ho?+ Efisɛ yɛka sɛ: “Abraham gyidi nti, wobuu no sɛ ɔyɛ ɔtreneeni.”+ 10 Bere bɛn na wobuu no sɛ ɔyɛ ɔtreneeni? Ɛyɛ bere a na watwa twetia anaa bere a na ontwaa twetia? Ɛnyɛ bere a na watwa twetia, na mmom bere a na onnya ntwaa twetia. 11 Na onyaa sɛnkyerɛnne+ a ɛne twetiatwa. Wɔde maa no sɛ ahyɛnsode,* de kyerɛe sɛ, ne gyidi nti, bere a onnya ntwaa twetia no, wobuu no sɛ ɔyɛ ɔtreneeni, sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛyɛ wɔn a wɔwɔ gyidi a wontwaa twetia no nyinaa agya,+ na wɔabu wɔn sɛ atreneefo; 12 afei nso, na ɛbɛma wabɛyɛ wɔn a wɔatwa twetia no agya, ɛnyɛ wɔn a wɔbata twetiatwa ho no nko ara, na mmom wɔn a wodii yɛn agya Abraham+ anammɔn akyi pɛpɛɛpɛ bere a na ontwaa twetia no nso. 13 Ɛnyɛ mmara na Abraham anaa n’asefo* nam so nyaa bɔhyɛ sɛ obenya wiase bi sɛ agyapade,+ mmom gyidi a onyae a ɛma wobuu no treneeni ntia.+ 14 Na sɛ wɔn a wɔbata mmara ho no na wobedi ade a, ɛnde na gyidi abɛyɛ biribi a mfaso nni so, na na bɔhyɛ no ayɛ bɔhyɛ hunu. 15 Nea ɛwom ne sɛ, Mmara no de abufuw ba,+ nanso baabi a mmara nni no, mmarato biara nso nni hɔ.+ 16 Ɛno nti na ɛnam gyidi so no, sɛnea ɛbɛyɛ a ebegyina adom so,+ na ama bɔhyɛ no atim ama n’asefo*+ nyinaa, ɛnyɛ wɔn a wɔbata Mmara no ho nko ara, na mmom wɔn a wɔbata Abraham gyidi ho nso. Ɔyɛ yɛn nyinaa agya.+ 17 (Ɛte sɛ nea wɔakyerɛw yi: “Mayi wo de wo ayɛ aman bebree agya.”)+ Eyi sii wɔ Onyankopɔn a onyaa ne mu gyidi no anim. Ɔno ne Onyankopɔn a onyan awufo, a ɔfrɛ nneɛma a ɛmmae sɛ nneɛma a ɛwɔ hɔ no.* 18 Ɛwom sɛ na onni nea obegyina so anya anidaso, nanso onyaa anidaso gye dii sɛ ɔbɛyɛ aman bebree agya, sɛnea na wɔaka ato hɔ sɛ, “Saa na w’asefo* bɛyɛ,”+ no. 19 Na ɛwom sɛ ne gyidi anyɛ mmerɛw de, nanso osusuw ɔno ara ne nipadua a na awu no ho, (efisɛ na wadi bɛyɛ mfe 100)+ ɛne Sara yafunu a na awu*+ no nso ho. 20 Nanso Onyankopɔn bɔhyɛ nti, ne gyidi anhinhim na wannye akyinnye. Na mmom ne gyidi ma onyaa ahoɔden, na ɔhyɛɛ Onyankopɔn anuonyam, 21 na ogye dii paa sɛ nea Onyankopɔn ahyɛ ho bɔ no, Obetumi ayɛ nso.+ 22 Ɛno nti, “wobuu no sɛ ɔyɛ ɔtreneeni.”+ 23 Nanso asɛm a ɛne “wobuu no sɛ ɔyɛ ɔtreneeni” no, ɛnyɛ ɔno nko ara nti na wɔkyerɛwee.+ 24 Mmom wɔkyerɛw maa yɛn nso. Yɛn nso wobebu yɛn sɛ atreneefo, efisɛ yegye Nea onyan yɛn Awurade Yesu fii awufo mu no di.+ 25 Yɛn mfomso nti na woyii no mae,+ na wonyan no sɛnea ɛbɛyɛ a wobebu yɛn atreneefo.+
^ Anaa “bem.”
^ Anaa “obu ɔbɔnefo ɔtreneeni.”
^ Anaa “wobu ne gyidi sɛ trenee ma no.”
^ Anaa “wɔde wɔn bɔne akyɛ wɔn.”
^ Anaa “wɔatwa wɔn dua.”
^ Anaa “Wɔde sii so dua maa no.”
^ Anaa “n’aba.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “ɔma nneɛma a enni hɔ ba.”
^ Anaa “Sara yafunu a na entumi nwo ba.”